Tiorkia, Rosia, Iran Miara-miasa mba hampitsaharana ny ady any Syria
Firenena mikambana Nodimandry i Kofi Annan
Misaona ny firenena mikambana satria nodimandry teo amin’ny faha 80 taonany i Kofi Annan, Sekretera Jeneralin’ny Firenena mikambana (Onu) teo aloha ny sabotsy 18 Aogositra lasa teo tany Bern (Suisse).
Nanambara tao anatin’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny ivotoerana fanaovan’ny Real fanazaratena omaly tolakandro ilay mpanazatra Frantsay Zinedina Zidane fa nanapa-kevitra ny tsy hanazatra an’ity ekipa notantanany nanomboka tamin’ny 4 janoary 2016 ity intsony ny tenany amin’ny taom-pilalaovana ho avy izao.
Mondial 2018 any Rosia
Ny anaran’ireo mpilalao 25 ao amin’ny ekipam-pirenen’i Rosia mpampiantrano ny hetsika izay ao amin’ny Vondrona A miaraka amin’i Arabie Saoudite, Egypte ary Urugay no entintsika an-gazety anio. Izy no hanokatra ny fihaonana rehetra amin’ny alakamisy 14 jona izao ka hifandona amin’i Arabie Saoudite any Moscou.
Giangluigi Buffon Nisintaka tanteraka
Nambarany tamin’ny fomba ofisialy fa amin’ny sabotsy 19 mey 2018 amin’ny lalao hihaonan’ny Juventus Turin amin’ny ekipan’i Verone no hilalaovan’ilay mpiandry harato Italiana malaza, Giangluigi Buffon 40 taona (176 sélections ), farany ao amin’ity Italiana nilalaovany nandritra ny 17 taona ity.
Mangotraka ny ady ao Gaza Palestinianina 52 maty, 2000 naratra
Nifanandrify indrindra tamin’ny fitokanana ny masoivohon’i Etazonia any Jerosalema omaly izay efa niteraka resabe am-bolana maro no raikitra ny fifandonana mahery vaika teo amin’ny Palestinianina sy ny miaramila Israelianina.
Neymar Jr Maniry hilalao hiaraka amin’i Cristiano Ronaldo
Tamin’ny zoma 4 mey lasa teo no nitodi-doha niverina tao Paris ilay kintan’ny kitra Breziliana Neymar ary efa niatrika fanazarantena tao amin’ny « centre Ooredoo » niaraka tamin’ny ekipan’ny PSG hilalaovany ankehitriny.
Korea Avaratra Hampitsahatra tanteraka ny fikarohana ara-nokleary
Nanaiky ny hanakatona tanteraka ny toeram-pikarohana sy fanamboarana baomba nokleary i Korea Avaratra raha araka ny nambaran-dry zareo Koreanina Tatsimo omaly.
Nifanaiky tany Ankara omaly ny filoha Tiorka, Rosiana sy Iraniana fa hiara-kiasa sy hanao izay azo atao mba hampitsaharana ny poa-basy any Syria.
Jerena izay fomba azo atao mba hitsaharan’ny ady eo amin’ireo mpifanadina, hoy Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine sy Hassan Rohani. Anisan’ny niadian-kevitra nandritra ny 1 ora sy 40 minitra teo amin’ny telo tonta ny hanampiana ireo vahoaka ao amin’ny tananan’i Ghouta. Noresahana ihany koa ny hanajana ny maha iray tsy mivaky ny tanin’i Syria sy ny ady amin’ny asa fampihorohoroana sy ny fampisaraham-bazana. Firenena lehibe 3 manana ny maha izy azy any amin’iny faritra iny i Tiorkia sy Rosia ary Iran ka nijoro mba hampiatoana ny poa-basy aloha sy hampitsaharana mihitsy ny ady any Syria satria efa tena mijaly ny mponina any an-toerana ary tanana maro no potika tanteraka.
Miha mafy ny fitokonan’ireo sendika
Mikorontana ny zotran-dalamby amin’ny lamasinina haingam-pandeha TGV, mbola ho avy ihany koa ny fitokonana ataon’ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka Air France ny 7, 10, 11, 17,18,23, 24 aprily ho avy izao. Manenjana ireo sendika any Frantsa ary hita ho miha mafy ny fitokonana noho ny fitakiana fisondrotan-karama 6%. Efa iray volana izay no nanomboka ireo karazana hetsika mifandraika amin’izany. Mahatsapa ireo mpiasa any an-toerana fa efa mafy loatra ny akon’ny fisondrotan’ny vidim-piainana nanomboka ny taona 2011 ka izany no hitakian’izy ireo izao fisondrotan-karama izao. Sahirana amin’ny fivezivezena noho ny izany ny Frantsay ary misy akony amin’ny asa andavanandro izany.
Vatana mangatsiakan’i Etienne Tshisekedi
Mety ho tafody any RDC ihany
Mandeha ny fifampiraharahana eo amin’ny fanjakana Congolais sy ny fianakaviana momba ny fampodiana ny vatana mangatsiakan’Atoa Etienne Tshisekedi, lehiben’ny mpanohitra tany RDC, izay nodimandry ny volana febroary 2017. Efa 14 volana no nihitsoka tany Bruxelles ny vatana mangatsiakan’ity mpanao politika ity satria tsy nahazo alalana tamin’ny fitondram-panjakana ny fampodiana azy any amin’ny repoblika demokratikan’i Congo (RDC). Tato ho ato anefa dia efa nisy indray ny fifampiresahana ka andrasana izay mety ho tohiny. Mampalahelo ny fihetsiky ny fitondram-panjakana, hoy ny fianakavian’Itompokolahy satria afangaro amin’ny resaka politika ny fikasanay handevina ny ray aman-dreninay. Tsy rariny ny resaka aparitaka, hoy i Felix Tshisekedi hoe tadiavin’ny fianakaviana atakalo toerana praiminisitra ny fanekena ny tsy fampodiana ny vata mangatsiakan’Itompokolahy.